Uyini umdlalo wothando ongcono kakhulu womdlavuza? - Isikhathi Sokuzalwa Komuntu
Uyini umdlalo wothando ongcono kakhulu womdlavuza?
Imibuzo Nezimpendulo Ezinhle Kakhulu - I-Cancer Love Horoscope
Izimpawu ezihambisana kakhulu ne-Umdlavuzangokuvamile kubhekwa njengeTaurus, Virgo, Scorpio nePisces. Izimpawu ezihambisana kancane ne-Umdlavuzangokuvamile kuthathwa njenge-Aries neLibra.
Ama-Aries, njengesibonakaliso somlilo, uzozihlanganisa ngokwemvelo nezinye izimpawu zomlilo njengoLeo noSagittarius. Ama-Aries anothando futhi ayakhuthazeka. Unayo intengo engqondweni futhi uzoyenza.
Kepha ukuzinikela kunenani lako. Lokhu kusho ukuthi kwabanye abantu, amabhubesi ayidlanzana. Inkani yabo ayihambelani kahle nalabo ababazungezile.
Kepha ukwethembeka akuvuzwa ngaso sonke isikhathi. Uma kunjalo, ufuna umuntu okwazisayo lokho kuthembeka. Ngenkathi ezinye izimpawu zomhlaba zipholile ukuhlala nazo, iScorpio izophila kahle, nayo.
Bayakwazi ukugcina iphathi iqhubeka. Lokhu yikho kanye okufunwa yiLibra, abangani abazobanika isikhathi esihle futhi bakhiqize amandla amahle. ILibra kaningi inzima ukwenza izingqondo zabo.
Noma kuthiwani ngezitha zakho ezimbi kakhulu ngokuya ngophawu lwakho lwe-zodiac? Babheke bobabili. Funda kabanzi mayelana nokuthi ungubani ngokususelwa kusibonakaliso sakho se-zodiac. Ungakhohlwa ukuthanda nokubhalisela isiteshi sethu.
Umdlavuza uzothandana nobani?
Ngakho-ke uma kukhulunywa ngokuhambisana, abantu baseCancer bahamba phambili nalaba: Abanye abantu baseCancer - kuzoba yisefa eyodwa endala enkulu. IPisces neScorpio - izimpawu zamanzi ezikanye nathi, okusho ukuthi ubudlelwane babo bukhulu ngendlela emangalisayo, ngokomoya nangokomzwelo. ICapricorn - uphawu lwabo oluphambene, nomdlalo wokuqina, wokuqinangobai-OTT yabo ...28. 2020.
(Inkanyezi iqhuma kancane) - Izimpawu ezinhlanu eziphezulu owesilisa weCancer uyakuthanda. Uma kukhulunywa ngokuthanda nokuxhuma ngokomzwelo kumlingani, awusoze wathola indoda engcono. Abesilisa abanomdlavuza imvamisa bangabantu abahle futhi abanomusa futhi baziwa njengomphefumulo obucayi kakhulu.
Ebuswa yinyanga futhi ezalwe ngaphansi kwesibonakaliso sowesifazane, uzoba nokuqonda okuqinile nokujula ngokomzwelo. Ngakho-ke, akumele kusimangaze ukuthi abantu beCancer baqhubeka nokubizwa ngendoda ephelele. Yiluphi uhlobo lwe-zodiac olwenza umlingani omuhle ebudlelwaneni besikhathi eside, ungayi ndawo njengoba siqoqe izimpawu ezinhlanu eziphezulu ukuthi indoda yeCancer ikuthanda.
Unamehlo kuphela kuwe ukuthi uyakuthanda ngoba uzokhangwa kuphela futhi abe nentshisekelo kumuntu oyedwa. Futhi nguwe lowo. Ukhuthazekile ukwakha ukuxhumana okusondelene ngokomzwelo okuhlala njalo.
Noma ngabe nindawonye ndawonye noma egumbini eligcwele abantu abaningi, ukubuka kwakhe ngeke kuze kube kude nethoyilethi lakho. Ubekelwe wena futhi wedwa kuphela, lokhu kuzodlulisa imiyalezo yakhe efihliwe yothando. Lapho eqala ukuthandana nawe, inzalo encane ayoba nayo kwabanye.
Ngakho bhekisisa. Futhi lapho uthola ukuthi indoda yakho yeCancer ayikwazi ukususa amehlo akho kuwe, lokho kuyisibonakaliso esicacile sokuthi nguwe wedwa kuye. Ukhombisa uthando lwakhe ngezenzo.
Uma kukhulunywa ngomdlavuza wesilisa, injabulo yakho ihlala ibaluleke kakhulu. Imizwa yakhe yangempela ingabonakala ngezenzo zakhe lapho ekholelwa ukuthi zinamandla kunamazwi wodwa. Ukwenzela ukudla, ukuwasha imoto yakho noma ukukuphathela inkomishi yetiye ungacelwanga konke lokhu kuyizimpawu ezincane zokuthi unothando olujulile ngawe olungalinganiswa engxoxweni.
Ufuna ukuqinisekisa ukuthi uzizwa uthandwa futhi uvikelekile futhi uzoshukumisela izulu nomhlaba ukuthi wenze njalo. Lezi zenzo ezingahleliwe zomusa ocabangayo usuku lonke ziyisibonakaliso somlilo sokuthi uthanda kakhulu wena. Ufuna ukuxhumana ngokomzwelo nawe.
Lapho indoda yeCancer izizwa ikuthanda futhi izokubuza imibuzo eminingi bese iba isilaleli esikhuthele. Ufuna umuzwa wokuphepha nokusondelana futhi utshale imali empilweni yakho yansuku zonke. Uzokubona ukuthi ungubani futhi uzothanda amaphutha akho nakho konke okunye. (umculo ozolile, ojabulisayo) Uzoba qotho futhi athembeke.
Indoda yeCancer ngokusobala ingesinye sezimpawu ezithembeke kakhulu ze-zodiac futhi ithembekile kuye. Futhi ngokuqinisekile ingesinye sezakhiwo ezikhanga kakhulu. Uma esekuthandile, uzozinikela ngamaphesenti ayikhulu ebudlelwaneni bakho futhi ahlale ezinikele kuwe impilo yonke.
Ungahlala uthembele kuye futhi sizohlala sikuthola uma ukudinga. Ukwethembeka nokwethembeka kuwe kuwuphawu olubulalayo lokuthi uyakuthanda. Uzokuvulela.
Abesilisa abanomdlavuza bavame ukungabaza futhi akulula ukuvula. Bavame ukufihla imizwa yabo yangempela, kepha uzoqala ukukuvulela. Lapho ebona ukuthi ulakha kanjani ikusasa nawe, ulindele ubudlelwano bokuthembana.
Ukuvuleleka nokwethembeka kuwe kukutshela ukuthi ukulungele ukuthatha izinga elilandelayo. Futhi uzolindela lokho kubuya ngokuthembeka. Ngaphandle komndeni wakhe nedlanzana labangane bakhe abaseduze, lapho uthola indoda yakho yeCancer ezokuthululela isifuba ikutshele imizwa yayo yangempela nezimfihlo zayo.
Ungabe usaya phambili ngoba kungenzeka ukuthi usanda kuthola indoda ephelele kakhulu ku-zodiac, manje futhi sizokubona ngokuzayo.
Isiphi isibonakaliso esidonswa yiCancer?
Umdlavuzaakunathembaukhangwai-zodiac engenamuntu futhi ebandayouphawu, I-Aquarius. Okokugcinauphawufuthi kuhlaselwaUmdlavuza. Kepha, i-equation yabo inobuthi ngoba bobabili abakwazi ukwanelisa izidingo zomunye nomunye.19. 2021.
I-CANCER LOVE: YINI I-CANCER Signs Zodiac Signs EkhangayoIzimpawu zomdlavuza ze-zodiac ziphakathi kwezimpawu ezinzima kakhulu ukuzifunda, zithinta kakhulu imizwa futhi zingavikeleki futhi kwesinye isikhathi zibukeka ngokweqile. Isole emanzini, uphawu lwayo lokuqala. Umdlavuza unezinhliziyo zabo ngokoqobo emikhonweni yabo futhi ngemizwa ehlukahlukene engena ngaphakathi kubo bangathola imizwa ejulile kakhulu noma engadingekile.
Umdlavuza ungeniswa kakhulu futhi ukhululeke ngokwengeziwe ukuba phakathi kwezihlobo zabo eziseduze. Bavame ukuba nezingxoxo ezijulile nezisondelene futhi bagweme imibuthano yokuzijabulisa lapho kuzodingeka bahlangane khona nabantu abaningi. Amaqembu amakhulu ashwabadela inkalankala, futhi njengenkalankala yangempela, bayaphoqeleka ukuba bahlehlele emagobolondweni abo ukuze bacashe.
Lokhu kungenza ukukhuluma nabo kube nzima kancane, kepha uma sebengene kuwe futhi bezizwa bekhululekile uma bekuwe, bathole umngani oqotho impilo yabo yonke. Uyemukelwa kuLifesolver, futhi namhlanje siphendula uthando lweCancer: Okuheha uphawu lweCancer Zodiac. Ungakhohlwa ukubhalisa bese ushiya amazwana athi 'Ngibhalisile' futhi ngizokuphendula wena uqobo ngokuphawula mathupha.
Ngaphambi kokuthi singene esihlokweni sanamuhla, ake sijule kancane ezimfanelweni zomdlavuza nobuntu Uma uzibuza ukuthi ngubani uCancer, laba bazalwa phakathi kukaJuni 21st noJulayi 22. NjengeScorpio nePisces, uphawu lweCancer lungolwesici samanzi futhi ngoba baqondiswa yizinhliziyo nemizwelo yabo, bakuthola kunzima ukuzihlanganisa nomhlaba nabantu ababazungezile. Ngoba inyanga iyazilawula, izigaba ezahlukahlukene zomjikelezo wenyanga zivusa iphethini yesikhashana yemizwelo engaphezu kwamandla abo.
Njengoba nje benganikeza usizo nosizo kwabanye ngokushesha, nabo bayashesha ukubalekela izimo eziphikisanayo nezimo. Umdlavuza uthola ukuthula nenjabulo lapho ezungezwe ngabantu abathandayo nalapho umndeni wakhe lyand ekhaya uzwana; kodwa-ke, lapho bengenakho ukubekezela nothando, uba ngaphandle ngokuzidabukela, ukukhohlisa, ubugovu nokujula, Ukubonisa Ukushintshashintsha Kwesimo Esesabekayo. Okuheha Isibonakaliso Somdlavuza Kutholakale ukuthi i-Cancer iyisibonakaliso se-zodiac se-anemotional, futhi ngenxa yalokho, into eyodwa ebaluleke kakhulu ebudlelwaneni babo yimizwa.
Bajwayele ukuba nabalingani abaqonda izidingo zabo nemizwa yabo ngokusebenzisa izindlela ezingakhulumi, ezithulelayo kanye nenkambiso yansuku zonke, bekha phezulu futhi bengathembekile. I-Cancer ayisona isibonakaliso esaziwa ngokuqanjwa okusha. Ngakho-ke, lokhu kungabi namanyathelo okuvimbela impilo yocansi oyifunayo, ikakhulukazi uma benomlingani ongakwazi ukubasiza bahlale bezolile futhi bephephile ngokwanele ukuveza imicabango yabo yezocansi.
Umdlavuza udonswa ekwethembekeni nasekuthembekeni. Lapho uCancer esazi ukuthi angakwethemba nokuthi uzoba qotho kuye uzothandana nawe. Umdlavuza uyisibonelo nomvikeli wabathandekayo babo, futhi okuncane abakulindele ngukuthi labo abanobudlelwano bothando nabo, Banezinga elijulile lokuthembeka nokuthembeka kubo.
Umdlavuza ungaba nemizwa ehlukile futhi uvumele imizwa ukuthi ingcolise izinqumo zabo; Bangezwa ubuhlungu obukhulu kakhulu lapho okuthile kungahambi kahle futhi imizwa yabo ilimele. Ngenxa yalokhu, baqhubeka ngokuqapha futhi bagwema ukuveza ubungozi babo ekuqaleni kobudlelwano. Kepha lapho bebona ukwethembeka nokwethembela kwakho, bayovumela imizwa yakho nothando lwakho luqhakaze.
Umdlavuza udonswa kubalingani abanomuzwa oqinile wokuhlala ekhaya. Umdlavuza ngabondli bemvelo. Lokhu kukhonjiswa ekutheni bayikhathalela kangakanani indlu futhi balungisa ukudla okumnandi kubantu ababazungezile futhi babanakekele.
Lapho ubona umuntu okhethekile ngaphambili kwekhaya, uba nokuheha lowo muntu. Bangabantu abanozwelo kakhulu, futhi ukukhuluma nabo kulula, okwenza kube lula ukubathanda. Lapho bebona lezi zimfanelo ezibonakala kwabanye abantu, baba nentshisekelo kuzo futhi bahambe ibanga elide ukunakekela abanye abantu, abafuni ukuthathwa kalula, kepha ukwazisa okulula ngezenzo zabo kungenza ukuthi Umdlavuza uyajabula.
Umdlavuza uhehwa ngabantu abanezisekelo eziqinile. Ngenxa yesimo sabo sokuzwela, umuntu ubengabona iCancer inaka izinto ezincane futhi ibheke izinto ezijwayelekile kakhulu uma iqhathaniswa nolunye uphawu lwe-zodiac. Ukuhlonipha impahla nobumfihlo beCancer babaletha ekukhulekeleni umlingani wabo ngoba iCancer igcina amaqoqo ezinkumbulo ezintweni ezibonakalayo, izinto zangaphandle ezingagcinwa zisondele futhi zifinyeleleke.
Ngakho-ke, bayakwazisa lapho indawo yabo nempahla yabo kungahlaselwa. Umdlavuza ukhangwa abantu abanesisekelo esiqinile njengokuhlonipha nokuzinikela. Ozakwethu abanalezi zimfanelo bayakhanga kubo ngokuhamba kwesikhathi, futhi ngemvelo eqinile, ebucayi yeCancer, ubudlelwano babo bungajabula.
Umdlavuza uhehwa ngabantu bendabuko. Ababona abalandeli bezitende zobusuku obubodwa noma abangani ngezinzuzo, kepha funa izintshisekelo zothando abangazakha futhi bazondle futhi bathuthukele ebudlelwaneni besikhathi eside nokuzibophezela okujulile emcabangweni womndeni futhi bancike kuwe uma unamandla, I-Cancer eyodwa yendabuko ithanda izingane futhi ngokujwayelekile ingahlala kumlingani othanda izingane futhi ofisa ukuba nabesifazane babo beCancer bangumama ongcono phakathi kwezinye izimpawu ze-Cancer zodiac, owesilisa noma owesifazane, ukuthandana nawe, ubabonise ukuthi uyawukhathalela umndeni ngokuhlonipha umndeni wakho nabantu ababazisayo emndenini wakho. Futhi, umbono wabo wezothando ugxilile ezindinganisweni zabo zendabuko futhi bangakhetha ukuthanda ezothando ngokugoba, behleli kusofa nomlingani wabo bebuka ama-movie ngengilazi yewayini nokuthile okumele bakuthathe.
Umdlavuza udonseleka ekubeni sengozini. Umdlavuza ungumvikeli, futhi uyakufezekisa ukuvikela abantu ababakhathalelayo. Ukukhombisa uhlangothi lwakho olusengozini yomdlavuza kuzobaholela ekutheni bavikele wena futhi bakusize ngangokunokwenzeka.
Ukuba sengozini yomdlavuza; Bazise ukuthi ubethemba ngokwanele ngokubavumela ukuthi bakusize ngokuthile noma bathole izeluleko zabo. Amahlaya amakhulu. Umdlavuza uthanda ukuhleka kahle futhi ngokusuka enhliziyweni, futhi noma imuphi umlingani ongaba naye owenza ahleke kakhulu ukhipha inhliziyo yakhe yonke.
Yize bethanda amahlaya, qiniseka ukuthi awweqisi ngokubenza bagxile ekuhlekiseni. Abakuthathi kalula ukugxekwa futhi bebengacabangi kabili ngaphambi kokuthatha umhlalaphansi ku-clam yabo uma uqhubeka ubapheka. Umusa nenhlonipho.
Ngaphandle kobuhle nobukhazikhazi, iCancer izodonswa kakhulu kubantu abanomusa nabanenhlonipho, kungakhathalekile ukuthi bangasiphi isigaba noma ubudala. Ukwehlulwa komdlavuza kulula uma wenza konke okusemandleni ukuba nomusa kubantu, ikakhulukazi abantu abavamile abathandana noweta, izingane ezincane, umuntu osekhulile, noma isilwane. Bayakwazisa futhi balindele ukuhlonishwa nokuhlonishwa kubalingani babo kubo.
Ungabona lapho umusa nenhlonipho okhombisayo kungalungile, ngakho-ke ungazami ukubazuza ngoba lapho bebona imvelo yakho, imvelo engenamusa, noma ngabe uhambe ibanga elingakanani ebudlelwaneni bakho, bazoba nguwe ukuhamba. Ngakho-ke, yiba nomusa wangempela futhi ubonise umusa ngoba unomusa. Ukwehluleka kocansi nokuhamba kancane ukuphoqa umdlavuza ebudlelwaneni noma unethuba lokulahlekelwa ngokuphelele.
Badinga ukuqiniseka ukuthi nguwe olungile kubo ngaphambi kokuba bazibophezele kuwe, ngakho-ke lungiselela ubudlelwano obude nobephuzayo nabo - baze babe nesiqiniseko sokuthi nguwe ofanele, bazokulengisa ocansini, bona njengokuthi ihamba kancane futhi inothando, awuyena omunye wabalingiswa abanesifiso sokulala, kodwa qiniseka ukuthi ukuya ocansini nomdlavuza akukubi njengoba ezophendula iziphakamiso zakho futhi adlale nawe. Umdlavuza ubakweleta kakhulu ubudlelwano bawo bezothando ngenxa yokwethembeka nokuzinikela kwawo. Ngenxa yalokhu, balindele ileveli efanayo yokuzibophezela, intshisekelo, kanye nokuzidela kumlingani wabo kungani bengalungiselela ubudlelwano nomuntu oqonda umqondo wokunikela bese uthatha esikhundleni.
Isimo somdlavuza nesinomdlavuza siyabasiza ukuthi bazulazule empilweni yabo yothando futhi bangazibekeli imingcele uma kukhulunywa ngomuntu abathandana naye futhi abamkhathalelayo. Ukuba ebudlelwaneni obuzinzile, bokuzibophezela kusiza i-zodiac ekhathazayo; Kodwa-ke, bafuna inkululeko nokuzimela ngezikhathi ezithile ukwenza lokho abakuthandayo futhi bachithe isikhathi esithile bagxile kubo. Izimpawu zomdlavuza ziyinqwaba yemibono yokudala, ngakho-ke zidinga umlingani ozinikeza isikhathi nendawo yokuvula imicabango yazo nokuvula ubuhlakani bazo Okubi ukuthi izinga eliphezulu lokuzibandakanya kukaCancer ebudlelwaneni ukuthi bavame ukuzidela kakhulu, ngisho nokubalimaza.
Ngenxa yalokhu, imvamisa uzothola umdlavuza omningi obhajwe kubudlelwano obungenampilo kanye namaphethini wezemizwa asabisayo. Futhi, lokhu kungabenza balawule kalula lapho bethandana nabalingani abangabakhohlisi nabangama-narcissist, uma ngabe uthande le ngxenye yabelana nomngane futhi ungakhohlwa ukubhalisa futhi usazise emazwaneni, ukuthi yini uphawu lweCancer zodiac oluhehayo!
Yini umdlavuza omuhle embhedeni?
Umdlavuza ujwayele ukukhetha izimo zocansi abanye abaningi abazithola bengakhululekile neze. Intandokazizilele ngohlangothi isithandwa esisodwa sizigoqele ngemuva komunyeinkalankala, uma uthanda. Lokhu kusebenza kahle ekuhlanganyeleni kwesitho sangasese sowesifazane, kanye nocansi lwangemuva.24. 2019.
(umculo we-slow drama) - Mike, wenzani? Mike, ukahle? UMike, upholile, mngani? Mike, ukahle? Kwenzenjani mike? Mike, uphuphe kabi? - Ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka. (Air rushes) (Music Dramatic) Isibani esiluhlaza okwesibhakabhaka - Lokho kuzwakale kukuhle. (Umoya uyashesha) - Izinto zokuqala kuqala.
Kuyini ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka Yebo, ngikhombisile imibala ehlukene nobude bamaza abelwe wona lapha ebhodini lami elimhlophe. Uma ubude bebude, imiphumela emibi yezempilo ozoyibona empeleni iso lakho. Okubomvu, okuluhlaza, ngaphezulu kuka-550 ngeke ubone imiphumela eminingi yezempilo.
Ukukhanya kwe-Violet, kungenzeka ukuthi uke wezwa ngokukhanya kwe-ultraviolet. Ngemuva kwalokho kuba nobungozi futhi ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka kulungile kule hinge. Kepha futhi ngifuna ukukukhombisa ukuthi iso lomuntu lisebenza kanjani ukuze ukwazi ukuqonda ukuthi ungayibona kanjani le mibala ehlukene.
Lapha uneso lomuntu. (Izethameli zishaya izandla) Umdwebo awubi. Kukhona i-optic nerve, i-cornea, umfundi, i-lens, i-retina.
Khona lapha, lapho ukukhanya kungena, kudlula esweni, kuye khona lapha ku-retina bese kuyashaya. Ngizosondeza, i-BAM, imodi yokusondeza! Lezi prs, lezi prs zikwenza ukwazi ukubona imibala. Futhi kunezinhlobo ezine zala ma-PR.
Ezintathu zazo ziyizigaxa. Esinye sazo yizinti. Izigaxa zibomvu, ziluhlaza sasibhakabhaka futhi zikuvumela ukuba ubone imibala emini.
Izinduku zikuvumela ukuba ubone ngaphandle kombala ebusuku. Indlela engikwazi ngayo lokhu ngekhanda esikoleni sobudokotela ukuthi, u-C wezigaxa, u-C ngombala, izinti zokumnyama. DR ngiyini? Udokotela.
Ufunda ngokushesha. Ngiyayithanda. Ake sithi ukubonga okukhulu kuMovement wethu osixhasayo ovela njalo. (Ukuphuthuma komoya) Ake sikhulume ngokukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka nangempilo yakho.
Ubufakazi obuhle bokuthi ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka kuthinta impilo yakho ngewashi lethu lezinto eziphilayo. Eyaziwa nangokuthi Isigqi Sethu Sokujikeleza. Ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka empeleni kucindezela i-melatonin.
Le yihomoni efihliwe ebuchosheni bethu ukuze isenze silele, silale ebusuku futhi silale ubusuku bonke. Kuthiwani uma uziveza ekukhanyeni okuningi okwesibhakabhaka manje? Ebusuku, ngaphambi nje kokulala, lokhu kungakwenza wehliswe ukozela. Njengoba ungacabanga, lokhu kuyinkinga.
Zonke izinhlobo zokukhanya zingacindezela i-hormone yakho ye-melatonin. Kungakho ngincoma kuzo zonke izindatshana zami zokulala ukuyigcina imnyama ngangokunokwenzeka ngaphambi kokulala. Kepha uma kushiwo lokho, uHarvard empeleni ukufundile waqhathanisa ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka nokukhanya okuluhlaza, futhi bathole ukuthi ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka kucindezele i-melaton icishe iphindwe kabili kunokukhanya okuluhlaza futhi kugudlise isigqi sakho se-circadian ngokuphindwe kabili uma kuqhathaniswa nokukhanya okuluhlaza okuluhlaza.
Amahora amathathu kuya ehoreni nohhafu. Lezi akuzona zonke izindaba ezimbi. Uma uvuka ekuseni.
Into yokuqala engikutshela yona ukuvula izibuko zakho zelanga. Isizathu ukukhanya kwelanga, esinokukhanya okuningi okuluhlaza okwesibhakabhaka phakathi kwaso, empeleni kuba ukucindezela i-hormone ye-melatonin, ekwenza wehle kancane, uqaphe kakhudlwana futhi usethe kabusha isigqi sakho se-circadian ukuze ukwazi ukulala kalula ngobusuku obulandelayo. Lokhu empeleni kuletha inkinga ethokozisayo, ngoba lapho sihamba? songa ugesi ngokwengeziwe, sisebenzisa amalambu amaningi e-LED, amashubhu we-fluorescent amaningi, ngokungafani nama-light light ajwayelekile.
Futhi yize lokho kuhle emvelweni, kungaholela ezindlekweni zezempilo zomuntu siqu. Singakulinganisa kanjani lokhu kuhamba? Ngicabanga ukuthi ngokuzayo sizoba namalambu akhipha ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka, kepha mhlawumbe izembozo zamalambu zingakuhlunga lokho kukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka. Ngaphandle kokuthi sibe nokuqamba okukhulu eminyakeni emihlanu kuya kweyishumi ezayo okungenzeka kube yinto engenzeka. (Umoya we-Hiss) Ake sikhulume ngezimo ezimbalwa zempilo yamehlo akho ukuthi ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka akusiyona imbangela.
Qala ngokucindezela amehlo akho. Uhlobo lwamehlo edijithali, olwaziwa nangokuthi yi-computer vision syndrome. Lokhu kwenzeka lapho sibuka ikhompyutha, ithelevishini, noma isikrini sikamakhalekhukhwini, futhi uma wenza lokhu isikhathi eside, abantu bavame ukuthuthukisa lolu hlobo lwamehlo, lokhu kukhathala kweso.
Isizathu sangempela salokhu lokhu kugxila okukhulu okubangela ukukhathala kwemisipha esweni lakho. Uma ugxile kakhulu, awucwayizi kaningi, futhi ukucwayiza okuncane kuholela ekomeni okwengeziwe, okuholela ekucasukeni, ekushisweni nasekutinyeni. Futhi uqagele ini? Nginezeluleko ezimbalwa zokuthi ungalwa kanjani nalolu hlobo lwamehlo, ufuna ukuba okungenani ube ngu-60 cm kusikrini sakho sekhompyutha.
Okwesibili, uma ubukade ubheke esikrinini sekhompyutha isikhathi eside impela, cabanga ukusebenzisa intandokazi yamehlo oyintandokazi, umthetho we-20/20/20. Njalo ngemizuzu engama-20 ufuna ipayi. bheka lokhu kungamamitha angu-20 kude okungenani imizuzwana engama-20.
Lesi yisinyathelo esibaluleke kunazo zonke ekuvimbeleni noma ekwelapheni uhlobo lwamehlo lwedijithali. (Umsindo womoya) ukonakala kwe-macular. Le yingxenye esemaphakathi ye-retina yakho.
Futhi lapho ulahlekelwa yi-macula yakho, lapho une-degeneration, empeleni ulahlekelwa yingxenye esemaphakathi yamehlo akho. Kunobunye ubufakazi bokuthi ukuvezwa kokukhanya kwe-UV nokuhlaza okwesibhakabhaka kuye kwaxhunyaniswa nokusheshisa ukonakala kwe-macular okuhlobene nobudala, esikutholile empeleni. Kuthatha inani elikhulu lokukhanya okwesibhakabhaka ukudala umonakalo kuleyo ngxenye ye-retina yakho.
Ngakho-ke uma ubuka ilanga lapho kunokukhanya okukhulu okwesibhakabhaka, ungazilimaza ngokuphelele. Kepha uma sibheka ucwaningo futhi sibona inani olitholayo ezikrinini zakho, kuncane kakhulu futhi mhlawumbe alwenele ukudala umonakalo omkhulu. Eqinisweni, uma uqhathanisa ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka kusuka ku-elekthronikhi ukuguga, ukubhema, ukukhuluphala, isifo senhliziyo, umfutho wegazi ophakeme, i-elekthronikhi kuyingozi encane futhi akukho okufanele ucabange ngakho noma ukhathazeke ngokuningi.
Ngakho-ke sizivikela kanjani ekukhanyeni okuluhlaza okwesibhakabhaka okuthinta ikhono lethu lokulala? futhi sishintshe amawashi wethu wemvelo? Izincomo zami empeleni zivela eHarvard Public School of Health. Okokuqala, susa izikrini okungenani amahora amabili ngaphambi kokulala, mhlawumbe ngisho namahora amathathu uma ukwazi. Okubili: Sebenzisa amalambu afiphele ngaphambi kokulala, amalambu afiphele abomvu.
Amalambu abomvu mancane amathuba okuthi aguqule isigqi sakho se-circadian futhi aphazamise ukulala kwakho. Okwesithathu, cabanga ngamaglasi aluhlaza okwesibhakabhaka uma unamashifu sekwephuzile noma kufanele usebenze ebusuku. Abaphenyi baseYunivesithi yaseToronto bahlola wona lo mqondo ngamaqembu amabili.
Owokuqala ukuvezwa ukukhanya okugqamile ngenkathi egqoke izibuko zokuvikela ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka. Iqembu lesibili, elivezwe ukukhanya okuphansi ngaphandle kwezingilazi, namazinga alo e-melatonin ayefana ncamashi, eqhubeka nokuqinisa umqondo wokuthi ukukhanya okwesibhakabhaka empeleni kuyayicindezela imfihlo yakho ye-melatonin. Lezi zibuko ze-MVMT everscroll engizigqokayo empeleni zihlunga ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka.
Futhi ngiyazigqoka lapho ngiphendula imibono yakho ye-YouTube noma ngibuka izindatshana ebusuku kakhulu kukhompyutha. Ngingumlandeli omkhulu wazo zonke izitayela ezahlukahlukene i-MVMT enazo zalezi zibuko ze-everscroll. Le ibizwa nge-Ingram Crystal Style.
Ngiyazithanda ngoba zehlukile ezibukweni zami zendabuko engijwayele ukuzigqoka. Ufuna ukuzitholela ngokwakho, ungomunye walezo zikhova zasebusuku noma umuntu othanda ukuzihlalela ekhompyutheni yakhe sekusebusuku, kukhona isixhumanisi semvmtwatches ngezansi .com, chofoza kuso.
Thola isephulelo esingu-15% ekuthengeni kwakho. (Ukugijimisa umoya) Uma ufuna ukwazi iqiniso ngomqubuko noshokoledi, chofoza lapha, noma uma ufuna ukwazi iqiniso ngokugwinya ushingamu lwakho, chofoza lapha. Ingabe Ugogo Uqinisile? Yiziphi ozichofoza kuzo? Njengenjwayelo, hlala uphephile futhi uzwakala (umculo omnandi)
Uphawu lwe-Aquarius luvame ukubhekwa njenge-umdlalo omubi kakhulungobaUmdlavuza.Ukuhambisana nomdlavuzailawulwa umuzwa nemizwa.30. 2021.
Uyini umphefumulo womlingani womdlavuza?
AmaCancer angathola i-umphefumulokuma-Scorpions noma ama-Pisceans. Ukufana okuhle kakhulu nakho kungamaVirgoans namaTaurean. Khetha noma iyiphi inhlanganisela engezansi ukuthola ukuthi iziphi izimpawu ezifanayoUmdlavuza.
Ngabe umdlavuza uthandana ngokushesha?
Umdlavuza(nomaAmaCancer, uma uthanda) bangabantu abazwelayo nabakhathalelayo. AUmdlavuzaphakathiuthandoukuwangokusheshanangokuduma okukhulu kakhulu. Njengoba zithambekele ekunikeleni ngakho konke, zigijimela phezulu ukuzibophezela. Mancane amathuba okuthola ezinye izibonakaliso zokuthola ibheyili lapho isimo siba nzima,Umdlavuzabathembeke kakhulu futhi bazimisele ukulungisa izinto.
Uyini umphefumulo weCancer?
I-Virgo.I-Virgomhlawumbe yi-soulmate enkulu kunazo zonke yeCancer ngoba zenzelwe omunye nomunye. Banokuxhumeka okungokomzwelo okuqine kakhulu. Amakhono abo wokuxhumana, nokwethembana kufana kahle.28. 2020.
Kungani umdlavuza uyisibonakaliso esibi kunazo zonke?
Ayilimazi emoyeni kuphela, kepha iphazamisa nempilo yakho ngokomzimba nangokwengqondo. Ngeshwa, lesi ngesinye isizathukungani umdlavuzayiokubi kakhuluZodiacuphawu. Baziwa ngokungami lutho ukuthola lokho abakufunayo, noma ngabe kusho ukusebenzisa abantu abasempilweni yabo ukwenza lokho.27. 2019.
Ingabe umdlavuza uhlaselwa embhedeni?
Umdlavuzazilukhuni ngaphandle kodwa zithambile ngaphakathi. Kuzothatha okuningi kakhulu kunokubuka okufudumele nokukhuluma okumnandi ukuthola i-Umdlavuzaungeneumbhede. Kepha uma usukwenzile, uzokwelashwa kokuhlangenwe nakho kocansi okungafani nokunye. Njengenkalankala,Umdlavuzazinzima ngaphandle kodwa zithambile futhi zithambile ngaphakathi.19. 2020.
Uyini umdlalo wezinkanyezi wothando lomdlavuza nsuku zonke wanamuhla?
Izolo Namuhla Kusasa I-Cancer Daily Love Horoscope 10.16.19: Okuqala njengokuxhumana okujwayelekile nomuntu owaziyo kungahle kugcine sekuneziqubulo zothando ezimangazayo namuhla. Noma mhlawumbe ungazithola ususenkingeni nomngane wakho, bese ubona ukuthi ulwazi lwakho luholele emizweni ejulile phakathi kwenu.
Yini i-horoscope yothando lomdlavuza ngo-2021?
Kodwa-ke i-Love Horoscope 2021 yeCancer iphakamisa ukuthi abomdabu othandweni bazozwa ukwanda kwamazinga abo okuxineka ngalesi sikhathi kanye nengcindezi eyengeziwe ezimweni eziningi. Ngakho-ke, uyadingeka ukuxazulula zonke izingxabano nokungaqondi kahle nomlingani wakho ngezikhathi ezithile.
Ngabe Konke Kuphathelene nothando ku-horoscope ka-2019?
I-2019 imayelana nothando. Thola umuntu okhethekile namuhla. I-2019 imayelana nothando. Thola umuntu okhethekile namuhla. FEB 3, 2020 - IMercury, iplanethi yezokuxhumana, ingena ePisces engokomoya, ephuphayo, enembile namuhla (kuze kube ngu-Ephreli 11), njengoba nje inyanga ingena eGemini, uphawu lukaMercury. Funda ukubuka konke okugcwele